Tag: suuq geynta robot | Martech Zone
Tag: suuq geynta robot
Kani waa mid ka mid ah qoraalada aad ku snicker at ka dibna aad u hesho tallaal bourbon ah si aad u ilowdo. Jaleecada hore, tani waxay umuuqataa su’aal lagu qoslo. Sidee adduunka ugu beddeli kartaa maamulaha suuqgeynta? Taasi waxay u baahan tahay awoodda si wanaagsan loo barto habdhaqanka macaamiisha, si qoto dheer loo falanqeeyo xogta iyo isbeddellada isbeddellada leh, oo si hal abuur leh looga fikiro in lala yimaado xalal shaqeeya. Su'aashu waxay nooga baahan tahay inaan ka wada hadalno shaqooyinka aan qabanno dhab ahaan